အိမ်တွင်းစစ်ပွဲတွေ ဘယ်လိုရပ်မလဲ ? | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Jan 20, 2020 Last updated Jan 20, 2020
လူမှန်ရင် အချစ်ကမ္ဘာကိုရှာစမြဲမို့လေ..ဆိုတဲ့ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းစာသားလေး လိုပါပဲ။အရွယ်ရောက်လာရင် လူတိုင်းနီးပါး ချစ်ချင်ကြတယ်..တွယ်တာချင်ကြတယ်..တူနှစ်ကိုယ်ချစ်ကမ္ဘာလေးတွေ တည်ထောင်ချင်ကြပါတယ်။
ချစ်စကြင်စမှာတော့ ကြားလေမသွေးအောင် ချစ်တတ်ကြပေမဲ့.. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှစ်တွေကြာလာလေ နွေးထွေးမှုတွေ လျော့ပါးသွားလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တခါတလေမှာလည်း ဘာမဟုတ်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေကနေ နောက်ဆုံး ပြတ်စဲကြရတဲ့ အထိဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
လူကြီးတွေထက်ပိုဆိုးတာကတော့ တူတူချည်နှောင်ခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးထုံးလေးတွေလို့ ဆိုရမဲ့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးလေးတွေပါပဲ။Broken family လို့ခေါ်တဲ့ စုတ်ပြတ်သတ်သွားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကနေ ဘာကောင်းကျိုးမှ ရဖို့မရှိပါဘူး။
ငိုသံတွေ၊ မျက်ရည်တွေ၊ အော်ဟစ် ဆူပူ ကြိမ်းမောင်းသံတွေ၊ ဒေါသတွေ၊ စိတ်ကျရောဂါတွေ နဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာသင့်ကလေးလေးတွေပဲ မွေးဖွားပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခု..relationship တစ်ခုကို အဆင်ပြေပြေ တည်တံ့အောင် ဘယ်လိုနေသင့်လဲ ??
ဒီအတွက် ဘယ်သူ့မှာ ပိုတာဝန်ရှိတယ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။နှစ်ယောက်လုံး တူတူကြိုးစားရမှာပါ။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ နားလည်မှု..အကောင်းတွေကို တူတူဝေမျှနိုင်မှုနဲ့ အဆိုးတွေကို တူတူရင်ဆိုင်ကျော်လွန်နိုင်ဖို့ နေ့စဉ် အပြုအမူတွေမှာ တဖြည်းဖြည်း ကြိုးစားပြောင်းလဲယူသွားရပါမယ်။
အပြစ်တင်ခြင်းက ဘာအကျိုးမှ မရှိပါဘူ။
ကိုယ်အပြစ်တင်ရင် သူ့မှာလည်း ပြန်အပြစ်တင်စရာတွေရှိမှာပါ။
လူဆိုတာ မှားတတ်တဲ့ သတ္တဝါပါ။
သူ့စိတ်ကူးတွေ ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ၊ အိပ်မက်တွေအတွက် အချိန်ပေးပါ။
တကယ်ကြားအောင်လည်း နားထောင်ပါ ..ပြန်တုံ့ပြန်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။
မေးခွန်းတွေပြန်မေးပါ။ သူလိုချင်တဲ့ အဖြေကို ကူရှာပေးပါ။
သူ့ရဲ့အရင်ကပုံစံနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့..အရင်လူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့.. ဘယ်သူနဲ့မှ ဘယ်စုံတွဲနဲ့မှ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။အရေးကြီးပါတယ်..ထပ်ပြောပါမယ်..ဘယ်တော့မှ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ သူ့ကို တခြားလူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။
ဘယ်လောက်သေးတဲ့ ကိစ္စလို့ပဲထင်ထင် ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ ကိစ္စပဲဖြစ်နေနေ သူ့ကို အသိပေးပါ။ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါ။
ဒီလောကပြေးလမ်းပေါ်မှာ သင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လက်တွဲပြီးပြေးဖို့ သူတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ ယုံကြည်လိုက်ပါ။
နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ဖြစ်အောင်နေပါ..သူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းက သင့်အတွက် မင်္ဂလာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒေါသထွက်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖောက်ခွဲပေးလို့ တင်းအားလျော့စေပြီး လူကိုကျန်းမာစေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒေါသဒဏ်သင့်ခံရသူတွေမှာ စိတ်ပိုဖိစီးသွားစေပြီး နေမကောင်းဖြစ်စေနိုင်တာတော့ မမေ့ပါနဲ့။
ထွက်သင့်တဲ့နေရာမှာ..ထွက်သင့်သလောက်ထက်တော့ ဒေါသ မပိုပါစေနဲ့။
သူ့လူတွေ ကိုယ့်လူတွေ ဆိုတာကိုမေ့လိုက်ပါ။
သူရော ကိုယ်ရော မိဘ ဆွေမျိုး အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာတွေ ကိုယ်စီရှိခဲ့ကြပါတယ်
ထားလိုက်ပါ..ပိုလှပသာယာတဲ့ မိသားစုကမ္ဘာသစ်ကို တူတူထပ်တည်ဆောက်ပါ
ပြုံးပါ.. ချစ်ပါ .. ချစ်တယ်လို့ပြောပါ..သူ့ပါးလေးကို နေ့တိုင်းဖွဖွတစ်ချက်နမ်းပါ
ဒေါက်တာရေချမ်းနှင့် ဆေးခန်းထဲက အသံများ (၁)